Farxad Gelinta Saygaaga ( Ninkaaga ) - Daryeel Magazine
1. Haddii aad khaldan tahay raali gelin bixi.
2. Haddii uu isaga khaldan yahay ha murmin hana qeylin ee u kaadi xaaladda inta ay ka degeyso, dabadeedna kala munaaqashood si nabad gelyo ku salaysan.
3. Haddii uu guriga yimaado isaga oo caraysan dad banaankana ka soo caraysiiyey, ka aamus ilaa ay ka ba’do caradiisa adiga oo markaasi raadinaya dariiqad aad ku dejinaysid haddii uu daalan yahay, ama shaqada laga soo caraysiiyey ama haddii lagu soo xad gudbay. Su’aal badan ha weydiinin ama inaad ku adkaysato ogaanshaha waxa ku dhacay, tusaale ahaan, inaad dhahdid waa in aad ii sheegtaa waxa ka soo caraysiiyey, waa in aan ogaadaa wixii kaa soo caraysiiyey, waxbaad qarinaysaa, iyo xaq ayaan u leeyahay in aan ogaado waxaasi IWM.
Ma doonaysaa in aad hesho Farxad? Ma rabtaa Guul iyo Farxad? Tuko Salaada 3 Qaab Oo Loo Xaliyo Xamaasada Macaamiisha Xanaaqsan Iska Jir Waxyaabahaan Dilaya Sharaftaada!!